जम्बो पंजीकरण पछि केहि डाउनलोड गरेन
प्रश्न जम्बो पंजीकरण पछि केहि डाउनलोड गरेन
6 महिना 1 दिन अघि #1319 by plinux24
मैले डाउनलोड गर्न प्रयास गर्नुभएको फाइलहरू मेरो डाउनलोड इतिहासमा सूचीबद्ध छन् तर यी फाइलहरू मेरो कम्प्युटरमा कहिल्यै डाउनलोड हुँदैन।
म कुनै सम्पर्क गर्न सक्दिन किनभने सम्पर्क पृष्ठ अवस्थित छैन। फाइलहरू कहाँ छन्? मेरो जम्बो पंजीकरण शुल्क चाँडै लिइएको थियो तर मेरो लागि केहि छैन।
6 महिना 21 घण्टा अघि #1321 by rikoooo
नमस्कार, प्लिनक्स 24,
तपाइँले लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुँदा एक त्रुटि सन्देश वा स्क्रिनमा केहि पनि डाउनलोड सुरु गर्न चाहानुहुन्छ?
5 महिना4सप्ताह पहिले #1324 by plinux24
यो साइट साँच्चै भुक्तानी दर्ता हुनुको लागि बेच्छ। मैले भर्खरै तपाईंको प्रश्नको उत्तर पूरा गरें, प्रस्तुत गर्नुहोस् र मैले क्याप्चा जाँच गरिनँ किनकि मैले लेखेको सबै कुरालाई हटाइदिएँ। म धेरै खुसी छु कि म केवल3महिनाको लागी दर्ता गरियो। म फेरि यो साइट प्रयोग गर्दिन।
वैसे पनि, होइन, मलाई कुनै त्रुटिहरू छैन कि जब सुरक्षा सञ्झ्यालमा ठीक हिड्दा अर्को सञ्झ्याल पप अप जसले सामान्यतया तपाईँलाई एक डाउनलोड स्थान चयन गर्न छनौट दिन्छ। त्यो सञ्झ्यालले केही सेकेण्डका लागि केवल अन्तिम र हराएको छ र केहि पनि डाउनलोड गरिएको छैन।
मेरो ब्राउजर सधैँ सोध्नुहुन्छ कि कहाँ डाउनलोड गर्न र पूर्वनिर्धारित स्थान सामान्य डाउनलोड फोल्डर हो।
5 महिना4सप्ताह पहिले -5महिना4सप्ताह पहिले #1325 by rikoooo
तपाईं Simviation.com मा जान सक्नुहुन्छ र केहि डाउनलोड गर्नुहोस्, यदि डाउनलोड सुरू हुँदैन भने मलाई थाहा दिनुहोस्, यसले मलाई तपाईंको समस्या पहिचान गर्न र समाधान दिन्छ।
वा, म सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, म तपाईंलाई पूर्ण फिर्ती दिन सक्नुहुन्छ।
अन्तिम सम्पादन:5महिना4हप्ता पहिले rikoooo.
5 महिना3सप्ताह पहिले #1336 by plinux24
म त्यस साइटमा लग इन गर्न सक्दिन। यो लगभग है जस्तै म दर्ता गरिएको छैन। मैले त्यहि क्रेडेन्सियलहरू प्रयोग गर्दछु म यहाँ लगइन गर्न प्रयोग गर्दछु।
5 महिना3सप्ताह पहिले #1337 by guitpik
के तपाईंले आफ्नो डाउनलोड फोल्डर जाँच गर्नुभयो?
5 महिना2सप्ताह पहिले #1338 by amberdog1
म त्यहि समस्या थियो जुन 1st समय मैले जम्बो पायो, मेरोa/ v डाउनलोड अवरुद्ध भयो र मैले त्रुटि सन्देश प्राप्त गरेन। तपाईंको ए / वी असक्षम गर्नुहोस् र तपाईंले प्राप्त गर्न खोज्नु भएको फाईल / फाइलहरू डाउनलोड गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
यो आशा र खुशी फ्लाइली आशा आशा :)
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.234 सेकेन्ड